ल्युपिट नामक सामुन्द्रिक आँधी कोरियातर्फ आउदै,शतर्कता अपनाउन आग्रह! – Kantipur Press
ल्युपिट नामक सामुन्द्रिक आँधी कोरियातर्फ आउदै,शतर्कता अपनाउन आग्रह!
अहिले ‘ल्युपिट’ नाम गरेको सामुन्द्रिक आँधि दक्षिण कोरियातर्फ आइरहेको छ। कोरिया नजिकैको इष्ट सि हुँदै आइरहेको यो आँधीले दक्षिण कोरियाको पूर्वि तटिय सामुन्द्रिक क्षेत्रहरुमा असर पार्ने बताइएको छ।
कोरियाको मौषम अनुमान शाखाले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार यो आँधिले पूर्वि सामुन्द्रिक तटिय क्षेत्रमा ठूलो पानी पार्ने बताइएको छ।
आज मध्यरातमा ल्युपिट नामक आँधि जापानको क्योसु आइपुग्ने र त्यसपछि इष्ट सि हुँदै दक्षिण कोरियातर्फ अघि बढ्नेछ। भोली यो आँधि कोरिया आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ। विहान ११ बजे यो सामुन्द्रिक आँधिको केन्द्रिय प्रेसर ९ सय ९२ हेक्टो पास्कल मापन गरिएको थियो। अघि बढ्दै जाँदा यो आँधिको क्षमता अझै बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ।
ल्युपिट नामक यो सामुन्द्रिक आँधिको प्रत्यक्ष असर दक्षिण कोरियालाई नपर्ने भएतापनि आँधिका कारण बहने तिब्र गतिको हावाले देशभर भारी बर्षा भने हुनेछ। सोमबार कोरियामा देशभर हावा हुरी चल्ने तथा पानी अत्याधिक पर्ने यहाँको मौषम पूर्वानुमान शाखाले बताएको छ।
यस आँधिको गति आइतबार अधिकतम २० मिटर प्रतिसेकेण्ड मापन गरिएको छ। सोमबार कोरियाको खाङ्वनदो क्षेत्रमा हावा हुण्डरी आउन सक्ने भन्दै नोटिस जारी गरिएको छ। आइतबार रातिसम्ममा खाङवनदो प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो पानी पर्नेछ।
यस क्षेत्रमा २ सय मिलिमिटर सम्म बर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी कोरियाको उल्येङ टापु तथा दोक्दो टापुमा सोमबार विहान २ सय ५० मिलिमिटरसम्म बर्षा हुने कोरियाको मौषम विभागले जनाएको छ।Eps sathi
कोरियामा बस्ने विदेशीलाई लक्षित गरी दक्षिण कोरिया सरकारले यस्तो सुचना जारी गर्यो(पुरा हेर्नुहोस)
दक्षिण काेरिया जाने श्रमिकहरुलाई जाेनसनकाे खाेप, दुई केन्द्रबाट उपलब्ध हुने